Sheeq C/raxmaan Janaqoow "Shariifku Meel cidl ah ayuu kaga tagay Asxaabtiisii hore" – SBC
Sheeq C/raxmaan Janaqoow "Shariifku Meel cidl ah ayuu kaga tagay Asxaabtiisii hore"
Mid ka mid ah saraakiishii hore ee ururkii mar 6da bilood ka arimin jiray koonfurta Soomaaliya ee Maxkadaha islaamiga iminkana ka mid ah xildhibaanada Baarlamanka DKMG ah ee Soomaaliya Sheeq C/raxmaan Janaqoow ayaa eedeyn dusha uga tuuray madaxweynaha DKMG ah ee Soomaaliya Shariif Sh Axmed .
Waxa uu Sh C/raxamaan Janaqoow ku eedeeyay madaxweynaha DKMG ah ee Soomaaliya in uu meel cidlo ah ugaga tahay asxaabtii ugu fir fircooneyd ururkii Maxkamadaha Islaamiga ahaa ee mar madaxda uu ka ahaa.
Janaqow waxa uu sidoo kale sheegay in xubnaha Dowlada iminka jirta loo qeybsaday 2 qeybood oo kale ah TfGdii uuka tahay Madaxweynihii Somalia C/laahi Yuusuf Axmed iyo kooxdii Casmara .
Taasi waxay sababtay ayuu yiri Sh Janaqow in meel cidlo ah uu kaga tagay Shariif Axmed xubnihiisii ururkii Maxkamadaha Islaamiga taasina ay tahay eedeynta uu u soo jeedinayo madaxweynaha Soomaaliya sida uu hadalka u dhigaye.
Waxa uu sidoo kale xildhibaanku soo jeediyay in laga gudbo arimaha kumeelgaarka ah islamarkaana loo gudbo dhisida Dowlada bidnimo qaran .
Sikastaba ha ahaatee marwalboo la gaaro xili kala guur ah oo laba dowladood isbadalayaan ama marxaladii kumeel gaarka aywaqtigeedii ay dhamaatay ayaa siyaasi kasta waxa uu saxaafada u sheegaa in aysan qancin sida ay wax u socdaan, tanina waxa ay u muuqataa mid uu sh Janaqoow kaga faaiideysanayo xukuumada soosocota.
Cali Maxamed Axmed Lucky